သူမကို ချစ်ရေးဆိုကြတဲ့ ထိပ်တန်း လူ(၅)ယောက်ထဲတွင် အနုပညာရှင် (၂)ယောက်ပါဝင်ကြောင်း ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မမဆောင်း – Shwe Ba
Homepage / Celebrity / သူမကို ချစ်ရေးဆိုကြတဲ့ ထိပ်တန်း လူ(၅)ယောက်ထဲတွင် အနုပညာရှင် (၂)ယောက်ပါဝင်ကြောင်း ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မမဆောင်း
သူမကို ချစ်ရေးဆိုကြတဲ့ ထိပ်တန်း လူ(၅)ယောက်ထဲတွင် အနုပညာရှင် (၂)ယောက်ပါဝင်ကြောင်း ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မမဆောင်း
မင်းသမီး ချော ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း က တော့ ပရိတ်သတ် ချစ် မင်းသမီးတစ်ယောက်အ နေနဲ့ ရပ်တည် နေသူဖြစ် ပြီး မိဘ အမွေ တွေ ကို တစ်ယောက် တည်း ရရှိခဲ့ တာကြောင့် အလှူ အတန်းများ ကို မပြတ်ပြု လုပ်နေ သူပါ။ သူမ ဟာ ”ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ချစ် သူဟာ ဆရာဝန် လား? စစ် ဗိုလ်လား? ဘောလုံး ဥက္ကဌလား? “ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်မှု တွေက မြင့်တက် လာရာမှ ပရိသတ် စိတ် ဝင်စားခံ လာရခြင်းဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒီ အင်တာဗျူးလေး မှာတော့ မမဆောင်း ကို ငွေ ရေးကြေးရေးပြည့်စုံ တဲ့ လူ(၅)ယောက် က ချစ်ရေး ဆိုလာကြ ပြီး အဲ့ထဲ က (၂)ယောက် က အနုပညာရှင် တွေ ဖြစ်ကြ တယ်လို့ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဖြေကြားပေး လာတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဒီ အင်တာဗျူးလေး ကိုတော့ မမဆောင်း အ နေနဲ့ ကိုယ်ဝန်သည် တစ်ယောက် အဖြစ် ပါဝင် ရိုက်ကူး နေတဲ့ ရိုက်ကွင်း မှာ မေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ မမဆောင်း က ပရိသတ် ချစ်အောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဇာတ်ရုပ်နဲ့ လည်း အိုင်တင် လေးတွေ လုပ်လို့ရတယ် လို့ မမဆောင်း က ယုံကြည် ထားပြီး “ ဒီမှာ မမဆောင်း လှလား၊ ဒီမှာ ကိုကို့ အတွက် ချစ် စု ဘူး ” စသည်ဖြင့် ပရိသတ် စိတ်ဝင် စားခြင်း ခံလာ ရ အောင် အမျိုးအမျိုး ဆွဲဆောင်ပြနိုင် တယ်လို့ မမဆောင်း က ပြောပါ တယ်။
ကြော်ငြာရိုက် တဲ့ အခါမှာ လည်း ဟို အရင်တုန်းကလိုမျိုး “ကျွန်မပစ္စည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်ရှင်၊ ဒါကတော့ ဘယ်လိုပစ္စည်းပါ” ဆိုပြီး ရိုးရိုးတန်းတန်း ကြော်ကြာနေရင် ပရိသတ်က လုံးဝစိတ်ဝင်စားလာမှာ မဟုတ်တော့ပဲ ယနေ့ခေတ်မှာ ကိုဗစ်နဲ့အတူ အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုက ကြီးမားလာတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက တီဗီရှေ့ကိုတောင် မရောက်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ မမဆောင်းက ပြောပြပါတယ်။အချို့သော မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ ဆိုရင်တောင် အရင်လိုရိုက်ကွင်းတွေနဲ့ အလုပ်မရှုပ်တော့ပဲ အွန်လိုင်းသုံးစွဲချိန် များပြားလာတဲ့အတွက် မမဆောင်းရဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို သတိထားမိလာကြတယ်လို့ မမဆောင်းက ပြောပြပါတယ်။
အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်း အရ မမဆောင်းဟာ ဆိုရင် မယ်တစ်ေ ယာက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွ က် ပရိသတ်တွေက မမဆောင်းရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သ တ်လို့ စိတ်ဝင်တစားရှိကြောင်းကို မမဆောင်းက အောက်ပါအတိုင်း ရယ်သွေးသွ မ်းပြီး ပြောလာပါတ ယ်။ “မမဆောင်းဆိုရင် မယ် ရထားတယ်ကွာ၊ မယ်ရ ထားတာဆိုတော့ လူတွေက စိတ်ဝ င်စားနေတယ်။ အထဲမှာဘယ်ေ လာက်ရှိလဲ၊ ဘာညာပေါ့နော်။ အဲ့တာကို မမဆောင်း က Attraction ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖော်ပြရတာ။ လျပ်ပေါ်လော် လီ မဟုတ်ဘူးကွာ။ ရေကူးဝ တ်စုံဝတ်ပြီး ကုန်းပြ နေတာ တို့၊ မဖွယ် မရာ လုပ်ပြ နေတာ တို့ ၊ ဒူးတွေထောင်ပြီး လုပ်ပြ နေတာတို့ မရှိဘူးလေ။ မမဆောင်းက ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကောက်ကြောင်းကို ရိုးရိုး ပဲ စိတ်ဝ င်စားအောင် ပြတဲ့ သ ဘော ပေါ့ နော်။” လို့ မမဆောင်းက ရှင်းပြလာပါတယ်။
ဒါ ကို တ ချို့ပရိသတ်တွေ က အထင် အမြင်လွဲ မှားပြီး “အစ က တော့ ရိုးရိုးသားသားမိုလို့ အားပေးတာ၊ အခု တော့ မကြိုက်တော့ ဘူး” ဆို ပြီး ဝေဖန် လာကြတယ်လို့ မမဆောင်းက စိတ်မကောင်းစွာပဲ ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ မမဆောင်းအနေနဲ့ အခုလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဇာတ်ရုပ် ကို သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အခါမှာလည်း ရှက်စိတ်ဝင်မိတာမျိုး မဖြစ်ပဲ ကိုယ်ကျရာ ဇာတ်ရုပ်မျိုးကို ကျေပွန်အောင် သရုပ်ဆောင်တဲ့လိုပဲ သတ်မှတ် တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မမဆောင်းအနေနဲ့ ရှေ့အင်တာဗျုးများမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသား ကိုရန်အောင်နဲ့ ကိုခန့်စည်သူတို့ရဲ့ သိက္ခာကို မထီ မဲ့မြင်ပြုသလို အဖြေမျိုးတွေ ဖြေကြားခဲ့မိတာကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့တဲ့အခါ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက မမ ဆောင်း စိတ်ရင်းကောင်းမှန်းသိတဲ့အတွက် “ပြောချင်တာသာပြော၊ ရတယ်” ဆိုပြီး နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ဗွေမယူပဲ ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ် လို့ ပြော ပါ တယ် ။
အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ် လို့လည်း သူမက အမြဲကံကောင်းတတ်သူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ မမဆောင်းက ပြောပြပါတယ်။ “ဒါရှေးဘဝက ကိုယ့်ရဲ့ ရေစက် ပေါ့နော်။ မမဆောင်းက ဘယ်လောက် အိနြေ္ဒသိက္ခာကြီးလည်း ဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေက သိပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို ဆို ရင် ကိုယ်က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ဆက်ဆံ တယ်။ ဒါကို ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မင်းသားတွေရော၊ အပြင်ကလူတွေအကုန်လုံးက သိ တ ယ် ။ ” လို့ မမဆောင်း က ဆို ပါ တယ် ။ သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူပ င်လျှင် မမဆောင်းကို “ဒီဘက်ခေတ် မှာ ဒီလိုလူမျိုး မရှိတော့ဘူး ” လို့ ချီးကျူးခဲ့ဖူးပြီး ဒီလိုပြောလို့ မမဆောင်းက သူများတွေကို အိနြေ္ဒသိက္ခာမရှိဘူးလို့ ပြောချင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ မမဆောင်းကိုယ်၌ က အလွန်အကြူးကို ရိုးရိုး၊ အေးအေး၊ အအကြီး ဖြစ်နေတာကို ပြောချင်တာပါလို့ မမဆောင်းက ရှင်းပြပါတယ်။
လောလော ဆယ် မှာတော့ မမဆောင်းကို ချစ်ရေးဆိုထားသူ (၅) ယောက်ရှိပြီး သူတို့အားလုံးဟာ နာမည်ကျော်ကြားသူ၊ ငွေကြေးချမ်းသာသူ၊ စ သည်ဖြင့် ထိပ်တန်းလူတန်းစားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ မမဆောင်းရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။အဲ့ထဲက (၂)ယောက်က အနုပညာ ရှင် တွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့လည်း မမဆောင်းက ပရိသတ်အားလုံးကို အသိပေးပြောကြားလိုက်ပြန်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မမဆောင်းဟာ ဆို ရင် အခုလို သူ့ကိုချစ်ပေးနေကြသူတွေအတွက်ပဲ စိတ်ထဲမှာ သီးသန့်အသိအမှတ်ပြုပေးထားပြီး အခုချိန်ထိ ချစ်သူရည်းစားရယ်လို့ မထားခဲ့ ဖူးသေးပဲ အကယ်ဤများ ထားဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် ချစ်ပရိသတ်တွေကို အရင်ဆုံး အသိပေးမယ်လို့ မမဆောင်းက ပြောပြပါတယ်။ မိန်း က လေးအများစု ဟာ ဆိုရင် ကိုယ့်ကို သည်းသည်းလှုပ်ပြနေသူတွေကို သဘောကျတတ်ပေမယ့် မမဆောင်းကတော့ ကိုယ်တိုင်က အေးဆေး သူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် အနေအေးတဲ့ယောက်ျားမျိုးကို သဘောကျလေ့ရှိတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ထုတ်ပြောလာပါ တယ် ။
ပရိသတ် ကြီးတို့ ရေ အခု ဆိုရင် မမဆောင်း ဟာ သူမရဲ့ လတ်တလောအချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သူမကို လာရောက်ချစ်ရေးဆိုကြသူတွေအ ကြောင်း ကို ပရိသတ်သိအောင် ထုတ်ပြောလိုက်ပြန်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း မမဆောင်းရဲ့ နောက်ပိုင်းအနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေး တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေကို ဝေမျှပေး ခဲ့ ပါဦး နော် ။
crd : Online Tadin
မငျးသမီး ခြော ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး က တော့ ပရိတျသတျ ခဈြ မငျးသမီးတဈယောကျအ နနေဲ့ ရပျတညျ နသေူဖွဈ ပွီး မိဘ အမှေ တှေ ကို တဈယောကျ တညျး ရရှိခဲ့ တာကွောငျ့ အလှူ အတနျးမြား ကို မပွတျပွု လုပျနေ သူပါ။ သူမ ဟာ ”ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ရဲ့ခဈြ သူဟာ ဆရာဝနျ လား? စဈ ဗိုလျလား? ဘောလုံး ဥက်ကဌလား? “ဆိုပွီးတော့ ဝဖေနျမှု တှကေ မွငျ့တကျ လာရာမှ ပရိသတျ စိတျ ဝငျစားခံ လာရခွငျးဖွဈ ပါ တယျ ။ ဒီ အငျတာဗြူးလေး မှာတော့ မမဆောငျး ကို ငှေ ရေးကွေးရေးပွညျ့စုံ တဲ့ လူ(၅)ယောကျ က ခဈြရေး ဆိုလာကွ ပွီး အဲ့ထဲ က (၂)ယောကျ က အနုပညာရှငျ တှေ ဖွဈကွ တယျလို့ ပှငျ့ပှငျ့ လငျးလငျး ဖွကွေားပေး လာတာပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ။
ဒီ အငျတာဗြူးလေး ကိုတော့ မမဆောငျး အ နနေဲ့ ကိုယျဝနျသညျ တဈယောကျ အဖွဈ ပါဝငျ ရိုကျကူး နတေဲ့ ရိုကျကှငျး မှာ မေးမွနျး ဖွဈခဲ့တာ ဖွဈပွီး ဒီဇာတျရုပျနဲ့ ပတျသတျလို့ မမဆောငျး က ပရိသတျ ခဈြအောငျ ကိုယျဝနျဆောငျ ဇာတျရုပျနဲ့ လညျး အိုငျတငျ လေးတှေ လုပျလို့ရတယျ လို့ မမဆောငျး က ယုံကွညျ ထားပွီး “ ဒီမှာ မမဆောငျး လှလား၊ ဒီမှာ ကိုကို့ အတှကျ ခဈြ စု ဘူး ” စသညျဖွငျ့ ပရိသတျ စိတျဝငျ စားခွငျး ခံလာ ရ အောငျ အမြိုးအမြိုး ဆှဲဆောငျပွနိုငျ တယျလို့ မမဆောငျး က ပွောပါ တယျ။
ကွျောငွာရိုကျ တဲ့ အခါမှာ လညျး ဟို အရငျတုနျးကလိုမြိုး “ကြှနျမပစ်စညျး အရမျးကောငျးပါတယျရှငျ၊ ဒါကတော့ ဘယျလိုပစ်စညျးပါ” ဆိုပွီး ရိုးရိုးတနျးတနျး ကွျောကွာနရေငျ ပရိသတျက လုံးဝစိတျဝငျစားလာမှာ မဟုတျတော့ပဲ ယနခေ့တျေမှာ ကိုဗဈနဲ့အတူ အှနျလိုငျးသုံးစှဲမှုက ကွီးမားလာတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှကေ တီဗီရှကေို့တောငျ မရောကျဖွဈတော့ဘူးလို့ မမဆောငျးက ပွောပွပါတယျ။အခြို့သော မငျးသား၊ မငျးသမီးတှေ ဆိုရငျတောငျ အရငျလိုရိုကျကှငျးတှနေဲ့ အလုပျမရှုပျတော့ပဲ အှနျလိုငျးသုံးစှဲခြိနျ မြားပွားလာတဲ့အတှကျ မမဆောငျးရဲ့ အှနျလိုငျးပျေါက လှုပျရှားမှုလေးတှကေို သတိထားမိလာကွတယျလို့ မမဆောငျးက ပွောပွပါတယျ။
အနုပညာ လှုပျရှားမှု မှတျတမျး အရ မမဆောငျးဟာ ဆိုရငျ မယျတဈေ ယာကျ ဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့အတှ ကျ ပရိသတျတှကေ မမဆောငျးရဲ့ ကိုယျခန်ဓာနဲ့ပတျသ တျလို့ စိတျဝငျတစားရှိကွောငျးကို မမဆောငျးက အောကျပါအတိုငျး ရယျသှေးသှ မျးပွီး ပွောလာပါတ ယျ။ “မမဆောငျးဆိုရငျ မယျ ရထားတယျကှာ၊ မယျရ ထားတာဆိုတော့ လူတှကေ စိတျဝ ငျစားနတေယျ။ အထဲမှာဘယျေ လာကျရှိလဲ၊ ဘာညာပေါ့နျော။ အဲ့တာကို မမဆောငျး က Attraction ပုံစံမြိုးနဲ့ ဖျောပွရတာ။ လပျြပျေါလျော လီ မဟုတျဘူးကှာ။ ရကေူးဝ တျစုံဝတျပွီး ကုနျးပွ နတော တို့၊ မဖှယျ မရာ လုပျပွ နတော တို့ ၊ ဒူးတှထေောငျပွီး လုပျပွ နတောတို့ မရှိဘူးလေ။ မမဆောငျးက ကိုယျ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျအလှကောကျကွောငျးကို ရိုးရိုး ပဲ စိတျဝ ငျစားအောငျ ပွတဲ့ သ ဘော ပေါ့ နျော။” လို့ မမဆောငျးက ရှငျးပွလာပါတယျ။
ဒါ ကို တ ခြို့ပရိသတျတှေ က အထငျ အမွငျလှဲ မှားပွီး “အစ က တော့ ရိုးရိုးသားသားမိုလို့ အားပေးတာ၊ အခု တော့ မကွိုကျတော့ ဘူး” ဆို ပွီး ဝဖေနျ လာကွတယျလို့ မမဆောငျးက စိတျမကောငျးစှာပဲ ရငျဖှငျ့လာခဲ့ပါတယျ။ မမဆောငျးအနနေဲ့ အခုလို ကိုယျဝနျဆောငျဇာတျရုပျ ကို သရုပျဆောငျရတဲ့ အခါမှာလညျး ရှကျစိတျဝငျမိတာမြိုး မဖွဈပဲ ကိုယျကရြာ ဇာတျရုပျမြိုးကို ကပြှေနျအောငျ သရုပျဆောငျတဲ့လိုပဲ သတျမှတျ တယျလို့ ပွောပါတယျ။ မမဆောငျးအနနေဲ့ ရှအေ့ငျတာဗြုးမြားမှာ ရုပျရှငျမငျးသား ကိုရနျအောငျနဲ့ ကိုခနျ့စညျသူတို့ရဲ့ သိက်ခာကို မထီ မဲ့မွငျပွုသလို အဖွမြေိုးတှေ ဖွကွေားခဲ့မိတာကွောငျ့ သူတို့နှဈယောကျကို ပွနျလညျတောငျးပနျခဲ့တဲ့အခါ သူတို့နှဈယောကျလုံးက မမ ဆောငျး စိတျရငျးကောငျးမှနျးသိတဲ့အတှကျ “ပွောခငျြတာသာပွော၊ ရတယျ” ဆိုပွီး နားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ ဗှမေယူပဲ ခှငျ့လှတျပေးခဲ့တယျ လို့ ပွော ပါ တယျ ။
အခဈြရေးနဲ့ ပတျသတျ လို့လညျး သူမက အမွဲကံကောငျးတတျသူတဈဦး ဖွဈတယျလို့ မမဆောငျးက ပွောပွပါတယျ။ “ဒါရှေးဘဝက ကိုယျ့ရဲ့ ရစေကျ ပေါ့နျော။ မမဆောငျးက ဘယျလောကျ အိန်ဒွသေိက်ခာကွီးလညျး ဆိုတာကို ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့သူတှကေ သိပါတယျ။ သူတဈပါးကို ဆို ရငျ ကိုယျက ယဉျယဉျကြေးကြေးနဲ့ ဆကျဆံ တယျ။ ဒါကို ကိုယျနဲ့ပတျသတျတဲ့ မငျးသားတှရေော၊ အပွငျကလူတှအေကုနျလုံးက သိ တ ယျ ။ ” လို့ မမဆောငျး က ဆို ပါ တယျ ။ သရုပျဆောငျ ခနျ့စညျသူပ ငျလြှငျ မမဆောငျးကို “ဒီဘကျခတျေ မှာ ဒီလိုလူမြိုး မရှိတော့ဘူး ” လို့ ခြီးကြူးခဲ့ဖူးပွီး ဒီလိုပွောလို့ မမဆောငျးက သူမြားတှကေို အိန်ဒွသေိက်ခာမရှိဘူးလို့ ပွောခငျြတာမြိုး မဟုတျပဲ မမဆောငျးကိုယျ၌ က အလှနျအကွူးကို ရိုးရိုး၊ အေးအေး၊ အအကွီး ဖွဈနတောကို ပွောခငျြတာပါလို့ မမဆောငျးက ရှငျးပွပါတယျ။
လောလော ဆယျ မှာတော့ မမဆောငျးကို ခဈြရေးဆိုထားသူ (၅) ယောကျရှိပွီး သူတို့အားလုံးဟာ နာမညျကြျောကွားသူ၊ ငှကွေေးခမျြးသာသူ၊ စ သညျဖွငျ့ ထိပျတနျးလူတနျးစားတှဖွေဈကွတယျလို့ မမဆောငျးရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ သိရပါတယျ။အဲ့ထဲက (၂)ယောကျက အနုပညာ ရှငျ တှေ ဖွဈကွတယျလို့လညျး မမဆောငျးက ပရိသတျအားလုံးကို အသိပေးပွောကွားလိုကျပွနျပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ မမဆောငျးဟာ ဆို ရငျ အခုလို သူ့ကိုခဈြပေးနကွေသူတှအေတှကျပဲ စိတျထဲမှာ သီးသနျ့အသိအမှတျပွုပေးထားပွီး အခုခြိနျထိ ခဈြသူရညျးစားရယျလို့ မထားခဲ့ ဖူးသေးပဲ အကယျဤမြား ထားဖွဈခဲ့သညျရှိသျော ခဈြပရိသတျတှကေို အရငျဆုံး အသိပေးမယျလို့ မမဆောငျးက ပွောပွပါတယျ။ မိနျး က လေးအမြားစု ဟာ ဆိုရငျ ကိုယျ့ကို သညျးသညျးလှုပျပွနသေူတှကေို သဘောကတြတျပမေယျ့ မမဆောငျးကတော့ ကိုယျတိုငျက အေးဆေး သူတဈယောကျ ဖွဈတဲ့အတှကျ အနအေေးတဲ့ယောကျြားမြိုးကို သဘောကလြရှေိ့တယျလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲ ထုတျပွောလာပါ တယျ ။
ပရိသတျ ကွီးတို့ ရေ အခု ဆိုရငျ မမဆောငျး ဟာ သူမရဲ့ လတျတလောအခဈြရေးနဲ့ ပတျသတျလို့ သူမကို လာရောကျခဈြရေးဆိုကွသူတှအေ ကွောငျး ကို ပရိသတျသိအောငျ ထုတျပွောလိုကျပွနျပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးတို့လညျး မမဆောငျးရဲ့ နောကျပိုငျးအနုပညာလှုပျရှားမှုလေး တှနေဲ့ ပတျသတျလို့ ထငျမွငျခကျြလေးတှကေို ဝမြှေပေး ခဲ့ ပါဦး နျော ။
Previous post ပုရိသတွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဗလောင်ဆူ သွားအောင် အလန်းစား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ လှလွန်းနေတဲ့ နန်းမွေ့စံ
Next post ပုရိသတွေကို နှလုံးရောဂါရ အောင် လုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးများ